बाबुरामलाई ८ घण्टामा साढे ८ हजार गाली गलौज
गृहपृष्ठ » राजनीति » बाबुरामलाई ८ घण्टामा साढे ८ हजार गाली गलौज
एकीकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले करिब ८ घण्टाको दौरानमा साढे आठ हजार गाली खाएका छन् ।
माघ ८ आजका दिन संविधान दिन नसकेकोमा उनको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत मतदाता र जनसमुदायसँग मागिएको क्षमायाचनामा उनले यस्तो गाली खानु परेको हो ।
उक्त स्टाटसमा १९ हजार बढीले लाइक गरेका छन् भने झण्डै आठ सयले सेयर गरेका छन् । उनका पक्षमा रहेकाले लाइक र सेयर गरेको तर विपक्षीहरु तथा केही सर्वसाधरणले भने कमेन्टमा गाली गलौज गरेको पाइएको छ । उनको स्टाटसमा कमेन्ट गरिएकामध्ये प्रायः सबै असन्तुष्टिपूर्ण रहेका छन् ।
यस्तो छ उनले क्षमायाचना माग्दै लेखेको सामग्री
आज माघ ८ ! जनतासंग गरिएको प्रतिबद्धता/भीष्मप्रतिज्ञा अनुरुप १ बर्षभित्र नयाँ अग्रगामी संविधान देशलाई दिन नसकेकोमा आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिंदै सम्पूर्ण मतदाता र आदरणीय जनसमुदाय समक्ष अन्तर्हृदयैदेखि क्षमायाचना गर्दछु।
नत्र ग्वेबल्सको प्रचारशैलीमा एकअर्कालाई अनर्गल आरोपप्रत्यारोप गर्ने र गोहीको आँसु झारेर सोझा जनतालाई ढाँट्ने र ठग्ने गरेमा इतिहासले कसैलाई पनि क्षमा गर्नेछैन।